သတင်းများ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာ Delivery » audio » Cloud ကိုတဆင့်သတင်းများ
စားသုံးသူများယနေ့မိမိတို့၏သွားလာရင်းမှသတင်းကိုချိုးဖောက်ဘို့ချန်နယ်အဖြစ်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှ ပို. ပို. လှည့်နေကြပါတယ်။ သတင်းနောက်ဆုံးတော့ TV ပေါ်မှာထုတ်လွှင့သည့်အခါမကြာခဏမထက်, စားသုံးသူပြီးသားထိုကဲ့သို့သော Facebook မှတိုက်ရိုက်, Twitter နဲ့ IGTV အဖြစ်လူမှုရေးလိုင်းများ၏မှန်ဘီလူးမှတဆင့်ဇာတ်လမ်းပါဝငျသောအရာကိုအကြောင်းကိုသူတို့၏စိတ်ထဲတွင်ထစေပြီ။
အပြည့်အဝဇာတ်လမ်းကိုအဝတ်မခြုံဘဲဖြစ်ပါတယ်နှင့်သတင်းရပ်ကွက်များကစစ်ဆေးအတည်ပြုကြသည်ကိုတစ်ကြိမ်မှသာသတင်းအပေါ်အစီရင်ခံဖို့အသုံးပြုရိုးရာထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့များ, ယခု '' အတုသတင်း '' ကျော်တိုးမြှင့်ဝေဖန်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရနေတုန်းသစ်ကြေညာသူနောက်ကွယ်မှကပ်တွယ်မှုကိုနေကြသည်။ ဤသည် In-အကြားအစာရှောင်ခြင်း, သေးအတည်မပြုနိုင်သောသတင်းတည်ရှိနေပေမယ့်သူတို့ကိုအရွက်; ကာတာနှေးအရှိန်အဟုန်မှာအသစ်တခုလမ်းကြောင်းသစ်အပြည့်အဝခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ရလဒ်အနေနဲ့သူတို့လည်းမရှိတော့ရိုးရာသတင်းလိုင်းများအတွက်စာကြည့်ရှုသူဆုံးရှုံးလျက်ရှိသည်။
နိုင်ငံသားသတင်းစာပညာ၏အသက်အရွယ်အတွက်, သတင်းထုတ်လုပ်မှုအသင်းများကိုအလျင်အမြန်အကြောင်းအရာဆည်းပူးပါဝငျ programming ကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဇာတ်လမ်းအခြားမည်သူမဆိုရှေ့တော်၌အသက်ရှင်ထုတ်လွှင့်နိုင်စေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤသည်အဘယ်မှာရှိလူမှုရေးလိုင်းများအနိုင်ရနေကြသည်ဖြစ်ပါတယ်: သူတို့ဆက်ရေးအဖြစ်သူတို့ကိုချိုးဖျက်အဖြစ်ပုံပြင်များထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်သူတို့အပျေါမှာအစီရင်ခံရန်ဆက်လက်နေကြတယ်, အလွန်အနှစ်တစ်ထောင်နှင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Z ကိုပရိသတ်တွေဆည်းကပ်၏အာရုံကိုဖမ်းယူ။
ဒါပေမယ့်စစ်တိုက်ရာတွင်ရှုံးနိမ့်မပေးပါ။ မိုဃ်းတိမ်မြင့်တက်သတင်းထောက်တွေကိုသည်ဤပြဿနာများကိုတုံ့ပြန်ရန်အဘို့အနည်းလမ်းအသစ်များကိုကမ်းလှမ်းနေသည်။ အဆိုပါအကြောင်းအရာစက်မှုလုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့မိုဃ်းတိမ်ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချလို့ရပါတယ်
၎င်း၏လယ်ပြင်ကနေတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုအားပံ့ပိုးမှုများအပါအဝင်ခြင်းဖြင့်သတင်းအစီရင်ခံခြိုးဖောကျ - အလွတ်တန်းသတင်းထောက်များနှင့်ပင်မျက်မြင်သက်သေများကနေ။ အသုံးပြုသူအုပ်စုများအမျိုးမျိုးကနေဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ဇာတ်လမ်းအပေါ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်စေရန်ခွင့်ပြုနေတုန်းမျိုးစုံအမြင်များနှင့်ရပ်တည်ချက်ရမှတ်ထဲကနေပြခံရဖို့နိုင်ပါတယ်။
နှင့်အရာရောက်ရှိရန်ခက်ခဲဆွဲဆောင်မည်, ပရိသတ်တွေအမြဲ-On - ထုတ်လွှင့်သက်ဆိုင်ရာများနှင့်ဆွဲဆောင်မှုနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ကြောင်းပုံပြင်များကိုဖန်တီးရန်သုံးစွဲသူထုတ်ပြန်သည့်အကြောင်းအရာများကို (UGC) ကိုသုံးရန်အဘို့အကြီးမားတဲ့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။
အစီရင်ခံ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် UGC အသုံးပြုခြင်းကိုလည်းသူတို့ကအရမ်းမျက်စိများ၏ရှေ့မှောက်၌တခုခုပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါသူတို့ကိုဇာတ်လမ်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေကြည့်ရှုနေတဲ့ရုပ်သံဌာနသို့မဟုတ် streaming များပံ့ပိုးပေးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဗီဒီယိုအားအလှူငွေဝေမျှဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဗီဒီယိုအတွက်ကြံ့ခိုင်သောမိုဃ်းတိမ်ကိုအခြေခံအဆောက်အဦများမြင့်တက်လာနဲ့ပေါင်းစပ်အိမ်၏အတွင်းနှင့်ထဲကအင်တာနက်ကိုနေရာအနှံ့ဝင်ရောက်ခွင့်, ယခုဆက်ကပ်အပ်နှံ app ကိုရှိဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပုံပြင်များကိုအထောက်အကူပြုဖို့စားသုံးသူများနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအစား, မျှဝေသူတစ်ဦး link ကို, hashtag သို့မဟုတ် QR ကုဒ်ကိုမှတဆင့်ဗီဒီယိုကိုမျှဝေပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဤသည် ABC ရုပ်သံအဖြစ်အဖြစ်လွယ်ကူသောအောင်, တစ်ဦး dongle ဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲထုတ်လွှင့်အသက်ရှင်ရန်သူတို့ကိုနိုင်ပါတယ်။
သတင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုချိုးဖောက်များတွင်အသုံးပြုအစောပိုင်း UGC ၏အရည်အသွေးမကြာခဏ OB ဗင်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာများကထုတ်လုပ်ကြောင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ subpar ဖြစ်ခဲ့သည်။ 5G ပူဇော်မည်စွမ်းရည်နှင့်အတူတွဲစမတ်ဖုန်းဆက်လက်နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုလွန်ကဲကဲ On-ဝေဟင် programming ကိုအသကျရှငျဖို့ကအများကြီးပိုကောင်းသင့်လျော်အောင်, စားသုံးသူထုတ်လုပ်နိုင်သည်အကြောင်းအရာ၏အရည်အသွေးတိုးတက်အောင်နေကြသည်။
မိုဃ်းတိမ်အမြင်နှင့်ရှုထောင့်တစ်ခုအကွာအဝေးကနေတခါမှာအများအပြားစီးဆည်းပူးဖို့ထုတ်လွှင့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအထုတ်လွှင့်ယခင်ကရက်ပေါင်းယူကြပြီမယ်လို့အဘယ်အရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကမိနစ်မြားတှငျပါဝငျခွငျး, Related content တွေကိုပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်ရန်ဖို့ပိုပစ္စည်းပေးသည်။ မိုဃ်းတိမ်ကိုလည်းပံ့ပိုးကွန်ရက်များချဲ့ထွင်ဘို့ခွင့်ပြု - အကြောင်းအရာနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အသုံးပြုသူနှစ်ဦးစလုံးထံမှအစာရှောင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်သူတို့ကိုဖွင့်။ အကြောင်းအရာ၏ဝယ်ယူအရှိန်မြှင့်နေချိန်တွင်သူတို့ကအစသိသိသာသာထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်အလိုအလျောက်မှနောက်ဆုံးပေါ် AI အဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်သောနှင့် metadata အမျိုးမျိုးအပေါ်အခြေခံပြီးအရှိဆုံးသက်ဆိုင်ရာဗီဒီယို, မိုဃ်းတိမ်ဖော်ထုတ်
ထုတ်လုပ်မှုအသင်းများကိုအလွယ်တကူတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အကြောင်းအရာပြင်ဆင်ထားရန်ကူညီပေးသည်။ အလွန်အနီးနာဂတျတှငျပိုမိုလျင်မြန်စွာ reels မီးမောင်းထိုးပြသို့တိုက်ရိုက်စီးအသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်, ပိုမိုမြန်ဆန်စစ်ဆေးအတည်ပြုနေတဲ့လက်ချောင်းများ၏ထိပုတ်ပါမှာလယ်ပြင်၌အစီရင်ခံနှင့်အတူပြည့်စုံအပေါင်းတို့နှင့်တကွသက်ဆိုင်ရာလိုင်းများကိုဖြတ်ပြီးလက်သို့အပ်ရနိုင်မယ့်စိတ်ကူးဇာတ်လမ်း generate ပါလိမ့်မယ် - တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ TV ပေါ်မှာနှစ်ဦးစလုံး နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာလမ်းကြောင်းများဆက်နွယ်။
အဆိုပါ Gap ဖြည့်
အဆိုပါစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပေါ်နေသောနှင့်ထုတ်လွှင့်အကြောင်းအရာပြတိုက်မှူးဖြစ်လာဖို့အကြောင်းအရာဖန်တီးသူဖြစ်ခြင်းကနေကပြွီးကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။ UGC နှင့်အတူတိုက်ရိုက်အကြောင်းအရာရောနှောစားသုံးသူရှုထောင့်ကနေကွာဟမှုဆိုထားသည်။ မိုဃ်းတိမ်၏အကူအညီနှင့်အတူ, ထုတ်လွှင့် '' ပရော်ဖက်ရှင်နယ် programming ကိုပျမ်းမျှကြည့်ရှုအချိန်အတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးမှုကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, ပါဝငျသောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးမိုဘိုင်းပံ့ပိုးမှုများနှင့်အတူကြွယ်ဝပြည့်စုံစေနိုင်သည်။
တစ်ဦးကသည်မိုဃ်းတိမ်ကိုအခြေခံပြီးအခြေခံအဆောက်အအုံသတင်းအသံလွှင့်များ၏အနာဂတ်များအတွက်အသေးစိတ်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ပုံပြင်များကိုချိုးဖျက်ဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်လူမှုရေးလမ်းကြောင်းများနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ tools တွေကိုပေးပါသည်။ အဆိုပါ input ကိုအခြမ်းကနေဖွဲ့စည်းပုံကိုပြောင်းခြင်းထက်ပိုမကျြဆနောက်ဆုံးမှာအမှတ်တံဆိပ်သစ္စာရှိမှုဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟု programming ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံ, သတင်းအချက်အလက်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါအသစ်သောအကြောင်းအရာဖန်တီးသူနှင့်အတူ၎င်းတို့၏လက်ရှိထုတ်လုပ်မှုအသင်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်သတင်းလိုင်းများနိုင်ပါတယ်။
Andreas Jacobi စီအီးအို & ၏တွဲဖက်တည်ထောင်သူဖြစ်ပါတယ် Make.TV, cloud-based ၏ဦးဆောင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း၎င်း၏တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုတိမ်တိုက်ပလက်ဖောင်းမှတဆင့်မိုဘိုင်းဗီဒီယိုကိုရှာမှီးခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်နေထိုင်ကြသည်။ မူလက Cologne, ဂျာမနီ, အတွက် 2010 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Make.TV ပံ့ပိုး-based နဲ့လူအစုအဝေးရင်းမြစ်မှရသည့်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုအတွက်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်းရှေ့ဆောင်ခြင်းနှင့် MTV / Viacom, FOX အားကစား, Linkedln, ProSiebenSat.1 နှင့်အခြားသူများအပါအဝင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ထိပ်တန်းမီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီများအတွက်ပွိုဖြေရှင်းနည်းများ, ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကအမှတ်စဉ်လုပ်ငန်းရှင်, Andreas ဥရောပ၌မီဒီယာနှင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများနံပါတ်စတင်ခဲ့သည်။ Andreas, cloud-based ကိုဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်စားသုံးမှု၏လယ်ပြင်တွင်မူပိုင်ခွင့်ရရှိထားသူများနှင့်ဆုတံဆိပ်များ TVB, TVT ၏လက်ခံရရှိသူဖြစ်ပါသည် IPTV, Webby, RedDot, Grimme Institute မှ, ECO နှင့်အခြားသူများ။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ အထောက်အပံ့ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor SJGolden - လှံ & Arrows TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-03-07
ယခင်: မီဒီယာ Links များစျေး NAB 100 မှာယင်း၏ 2019G မီဒီယာ-ဗဟိုပြုအိုင်ပီ Switching စီးရီး
နောက်တစ်ခု: ပလက်တီနမ်Tools® 45 NAB & ISC အနောက်ရှိုးများစဉ်အတွင်း EXO ezEX-RJ2019®ရပ်စဲခြင်း & စမ်းသပ်ပစ္စည်းများ Away Give မှ